Microsoft Windows နဲ့ 10 အခမဲ့ Upgrade Revisited - သတင်း Rule
Microsoft Windows နဲ့ 10 အခမဲ့ Upgrade Revisited
ပို 200 လူဦးရေသန်းပြီးသား Windows ကိုအသုံးပြုနေတယ် 10, သင်ဤအကြံပြုအဆင့်မြှင့်ကိုလက်ခံလျှင်မူကားအဟောင်း software နှင့်အရံပစ္စည်းဆဲအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်?
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Microsoft Windows နဲ့ 10 အခမဲ့အဆင့်မြှင့် revisited: သင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေသုံးပြန်ပြော” ဂျက် Schofield ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 11 ဖေဖေါ်ဝါရီလအပေါ်များအတွက် 2016 09.04 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
ငါက Windows ကနေအဆင့်မြှင့်7သို့ 10 အရာအားလုံးဒဏ်ငွေသွားလေ၏တူနှင့်ကကွညျ့ရှု, ငါ့အိမ်က screen ကိုချွေတာပြောင်းလဲရှိရာ icon တွေကိုစာရင်းခဲ့ကြသည်ပင်သော်လည်း. ငါအလုပ်ရမရနိုငျတအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ HP က OfficeJet ဖြစ်ပါသည် 7310 all-in-One device ကို, ပရင်တာအဖြစ်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာ, တတူ, စကင်နာ, နှင့်ဖက်စ်စက်. အခုပရင်တာ function ကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်သောတစ်ဦးတည်းသာဖြစ်ပါတယ်. စတိဗ်
နယူးလည်ပတ်မှုစနစ်များကိုများသောအားဖြင့်အသစ် drivers တွေကိုလိုအပ်, နှင့်အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းသည်အ, ဒီအများအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများကထောက်ပံ့ပေးဒရိုင်ဘာကိုဆိုလိုသည်. ဤအမရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်, Microsoft ကယေဘုယျ drivers တွေကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ်. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဤနေရာတွင်ဖြစ်ပျက်ရဲ့အဘယျသို့င်, အမှားကြောင့်.
ကံကောင်းစွာ, HP ကပေးပါဘူး 32-bit နဲ့ 64-bit နဲ့ Windows ကို 10 အ HP က OfficeJet များအတွက်ယာဉ်မောင်း 7310. သင်လိုအပ်ရာထွက်ရှာရန်, Start button ကိုနှင့်ကို select လုပ်ပါ System ကို Right-click နှိပ်ပြီး. "စနစ်အမျိုးအစား" အောက်မှာကြည့်ပါ: ဒါကြောင့် "64-bit နဲ့ Operating System ကို" နဲ့တူတစ်ခုခုပြောလိမ့်မယ်.
မျက်နှာပြင်-ချွေတာကိုပြောင်းလဲစေရန်, ကို Start menu ကိုသွားပြီး Settings ကိုရွေးပါ. နောက်တစ်ခု, Personalisation စာကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ထို့နောက်မျက်နှာပြင်သော့ခတ်, နှင့်စာမျက်နှာရဲ့အောက်ခြေမှာ "Screen ကိုချွေတာ settings" ကိုကြည့်ရှုပါ. ပြီးနောက်, ရွေးချယ်မှုတာက Windows အတွက်သူမြားကိုတူ 7.
desktop icon များယခုစိတ်ဓာတ်နေကြတယ်. အဆိုပါ Start Menu ကိုသင့်ရဲ့အများဆုံးအသုံးပြုတဲ့ applications များပြသထားတယ်, နှင့်ပိုမြန် access များအတွက်, သင် taskbar ရန်သင့်အကြိုက်ဆုံး apps များ pin နိုင်သည် - Windows တွင်အဖြစ် 7.
တစ်နည်းနည်းဖြင့်, သင့်ရဲ့ icon များရှိသေးဖြစ်စေခြင်းငှါ. desktop ပေါ်မှာပေါ်မှာ Right-click, ကြည့်ရန် select လုပ်ပါ, ထို့နောက်သူက "Show desktop ပေါ်က icon များ" ကပြောပါတယ်ရှိရာ menu ရဲ့အောက်ခြေကိုသွား. စာသားကိုနှိပ်ခြင်းသူတို့ကိုချက်ချင်းပေါ်လာသို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားစေမည်.
သင်တစ်ဦးပျောက်ဆုံး icon ကိုထည့်သွင်းဖို့လိုပါလျှင်, Start Menu ထဲမှာ program ကိုရှာပါ (အားလုံး apps များအတွက်ဥပမာ) နှင့်ရိုးရိုး desktop ပေါ်မှာကဆွဲ. သို့သော်, desktop ပေါ်က icon များဖွင့် shortcuts တွေကိုဖြစ်ကြောင်းကိုသတိပြုပါ: သူတို့တိုက်ရိုက်ကွက်များနှင့်တူကို update ပါဘူး.
နောက်ဆုံး, နောက်ကျောက Settings / Personalisation စာမှသွား, Themes ကိုရွေးပါ, ထိုသို့ "Desktop ကို icon ကို setting များကို" ကပြောပါတယ်ရှိရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ. ဒါဟာသင်ထိုကဲ့သို့သောဒီကို PC အဖြစ်စနစ်ဟောင်း icon တွေကိုထည့်ပါသို့မဟုတ်ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ် (My Computer ကိုခေါ်), အသုံးပြုသူရဲ့ Files တွေကို, ကွန်ယက်နှင့် Recycle Bin ကို.
ထုတ်လုပ်သူ 'ဆော့ဗ်ဝဲ Keeping
ငါက Windows ငါ့ Sony Vaio SVE15129CN အဆင့်မြှင့်ပြီ 10 နှင့်အရာအားလုံးဒဏ်ငွေသွား. ငါနောက်ပိုင်းမှာပြဿနာတွေသို့ပြေးခဲ့လျှင်, ငါက Windows အသုံးပွုဖို့ဆုံးဖြတ် 10 installation မီဒီယာ, မိုက်ခရိုဆော့ဖ် website ကိုငါ့အကို PC ထုတ်လုပ်သူ install လုပ်ပြီးသော apps များကို uninstall လုပ်ပေးဖို့လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏.
ငါ Sony က apps များအများအပြားကိုမုန်းပေမယ့်, ထိုသူအချို့အတော်လေးအသုံးဝင်. ငါသူတို့က Windows ၏စင်ကြယ် reinstallation ပြီးနောက်နောက်တဖန် install လုပ်သင့်ကြောင်းချင်တယ် 10.
ငါအခမဲ့အဆင့်မြှင့်ရရှိနိုင်၏တနှစ်ပြီးသန့်ရှင်းတဲ့ install ဘူးဆိုရင် (ဆိုလိုသည်မှာ 29 ဇူလိုင်လ 2016), Windows ကိုငါ့မိတ္တူလည်းပြီးတော့ activate လိမ့်မည်? Nikhil
အဆိုပါ Windows ကို 10 In-ရာအရပျအဆင့်မြှင့်တော်တော်လေးအများကြီးစင်ကြယ်တပ်ဆင်ဖြစ်ပါသည်. Windows ကို 10 install လုပ်ဖြစ်ပါတယ်, အဟောင်းပစ္စည်းပစ္စယဖြတ်ပြီးကူးယူသည် (အရာတစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ် setting များကိုလွဲချော်), ပြီးတော့အဟောင်းကို operating system ကိုသီးခြား folder ထဲမှာယာယီသိမ်းဆည်း. သင်တစ်ဦးစနစ်တစ်ခုရဲ့ Refresh အားဖြင့်ဖြေရှင်းမရနိုငျသောပြဿနာများရှိသည်အမှု၌ဤလိုအပ်သောဖြစ်ပါသည် (Settings များ > Update ကို & လုံခွုံရေး > recovery > ကွန်ပျူတာ Reset) သင်အဆင့်မြှင့်ပြန်ပြောင်းချင်တယ်.
သငျသညျပွောဆိုသည့်အတိုင်း, သင်က Windows ကို အသုံးပြု. DVD ဒါမှမဟုတ် USB ကနေသန့်ရှင်းတဲ့ installation ကိုလုပျနိုငျ 10 installation မီဒီယာ. ဒါပေါ့, ဒီ download, မည်သည့် PC ကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်သူရဲ့ကို bundle software ကိုပါဝင်မပါဝင်ပါဘူး. တကယ်ပါပဲ, ကမကြာခဏစင်ကြယ်တပ်ဆင်လုပ်နေကြအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်င်. ဒါကြောင့်, သငျသညျတစျခုလုပျမပြုမီ, သင်မလိုအပ်ဆိုကို bundle software နှင့်ယာဉ်မောင်း redownload နိုင်ကြောင်းသေချာစေရန် Vaio ဝဘ်စာမျက်နှာများကိုစစျဆေး. ဥပမာပါဝင် Windows ကို 10 upgrade စာမျက်နှာ, Windows ကို 10 ဘယ္လို & ထောက်ပံ့, နှင့် ယာဉ်မောင်း, firmware & Software များ.
Microsoft ကယေဘုယျ Windows ကို code တွေနဲ့အားလုံး၎င်း၏ PC ကွန်ပျူတာထုတ်လုပ်သူများဖြန့်ဖြူးစိတ်ကိုသည်းခံပါ. ဒါဟာသူတို့က add မထိန်းချုပ်ရှိပါတယ်, သူတို့ဟာ့ဒ်ဝဲဖို့ Windows ကိုစိတ်ကြိုက်ပုံကို သိ. ၏နှင့်မျှမတို့လမ်း.
သို့သော်, သငျသညျပြီးသား Windows ကိုမှတစ်ဦး In-ရာအရပျအဆင့်မြှင့်ပွုသောကွောငျ့ 10, သင့်ရဲ့ activation key ကိုယခုအွန်လိုင်းသိမ်းဆည်း. သင်တစ်ဦးသည်စင်ကြယ်တပ်ဆင်ပြုလျှင်, ဒါကြောင့်အလိုအလျှောက်ကိုသက်ဝင်သင့်တယ်, ဘယ်လောက်ပဲရှိနေနေရက်စွဲ၏.
ငါ၏အ Excel ကိုနဲ့ Word လိမ့်မည် 2000 Windows နဲ့အလုပ် 10? ဘရုစ်
Microsoft Office ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကို Windows တွင်အလုပ်လုပ်ဟန် 10, နှင့် Microsoft ရဲ့ Gabe aul - ကို Windows အသင်းအတွက်တစ်ဦး VP - Office ကို run နေပါကတစ်ဦးမျက်နှာပြင်, shot Tweet လုပ်ခဲ့ 95 ကနေ 1995. အများဆုံးပြဿနာဖြစ်ပုံရသည်ကြောင်းအဆိုပါလျှောက်လွှာ Outlook နဲ့အီးမေးလ်နှင့်စည်းရုံးရေးမှူးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်. သို့သော်, မည်သည့်အစီအစဉ်နှင့်အတူအဖြစ်, သငျသညျအစဉ်အမြဲကြိုးစားနိုင်ပါ compatibility Mode ကို. ဒီလိုလုပ်ဖို့, Right-click နှိပ်ပြီးအစီအစဉ်ကိုပေါ်နှင့် drop-down menu ကနေ Properties ကို select လုပ်ပါ. "အဘို့အ compatibility mode မှာဒီ Run ကပြောပါတယ်သော box ကို tick:"ပြီးတော့အထဲက Windows ကိုတစ်ဦး version ကိုရွေးချယ်ပါ 95 သို့ 8.
Windows ကို 10 သင့်ရဲ့ Office ကိုအစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်သင့်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒီမှားသွားနိုင်ပါတယ်. အကောင်းဆုံးကတော့, သင်က re-install လုပ်နိုင်အောင်သင်တို့၏မူရင်း Microsoft က Office ကိုဒီဗီဒီနှင့်သင့် product key ကိုတစ်ဦးမိတ္တူရှိသင့်. (ကဲ့သို့သောအဖြေအစီအစဉ် Belarc အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် သင့်ရဲ့ PC ကိုမှရုံးနဲ့ Windows ထုတ်ကုန် keys တွေကို retrieve လိမ့်မည်: သငျသညျနှစ်ဦးစလုံးသိလုံးဝသေချာပါစေ။) သင်သည်သင်၏အချက်အလက်များ၏ Backup တွေကိုလည်းရှိရမည်, ထိုသို့အဓိကအဆင့်မြှင့်လုပ်နေတာရှေ့၌သင်တို့မြေတပြင်လုံးကို PC ကို back up ပညာရှိင်.
သို့သော်, ရုံး 2000 တစ်ဦးရှေးဟောင်းဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာဇွန်လထဲမှာဖြန့်ချိခဲ့သည် 1999, နှင့် Microsoft ကလုံခြုံရေးပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများနှင့်အတူကထောက်ခံရပ်တန် 10 နှစ်ကြာပြီးနောက်, တွင် 2009. ဒီဒါခေါ်ဖို့ပွင့်လင်းသငျသညျထားခဲ့နိုင် macro virus ကို တိုက်ခိုက်မှုတွေ, ဒါကြောင့်လူအနည်းငယ်ကရုံးမှကိုသုံးသော်လည်း 2000, ငါမဆို malware ကိုစာရေးဆရာများဆဲကအဓိကပစ်မှတ်ထားသောသံသယ.
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါအသစ်တစ်ခုကိုဝယ်ချင်ပါတယ်, Microsoft ကရုံး၏စှာတိုးတက်လာသောမိတ္တူ, ဒါမှမဟုတ်အခမဲ့ကိုသုံး သင့်ရဲ့ OneDrive တွင်အွန်လိုင်းရုံးမှအစီအစဉ်များ. အကယ်. သင်သည် Windows မှအဆင့်မြှင့်ပြီးပြီ 10, သငျသညျလညျးအခမဲ့ install လုပ်နိုင်ပါတယ် Windows အ Store မှ Word ကို Mobile နှင့် Excel ကိုမိုဘိုင်း apps များ. ဤရွေ့ကားအချို့ကိုသင်အလုပ်အော့ဖ်လိုင်းလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်.
သို့သော်, သငျသညျအကြမ်းဖျင်းနေကတည်းက 16 Microsoft ကရုံး၏လက်ရှိအဆင့်ကိုနောက်ကွယ်မှအနှစ်, သငျသညျဖြစ်နိုင်ဘက်တန်းနိုင်မှ LibreOffice 5.1. ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်သေချာပါကမှန်ကန်စွာဖိုင်တွေကိုကိုသက်ရောက်စေစစျဆေးနိုငျ. လည်း, အ LibreOffice 5.1 user interface ကိုရုံးမှတာပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည် 2000 ဒါကြောင့်ရုံးကရန်ဖြစ်ပါသည်ထက် 2016, Microsoft Office နှင့်အတူသစ်တစ်ခုဖဲကြိုး-based interface ကိုမိတ်ဆက်သောကြောင့်, 2007.
• Microsoft Windows နဲ့ 10 အခမဲ့အဆင့်မြှင့်: ငါးမေးခွန်းတွေကိုပြန်ဖြေ
• Microsoft Windows နဲ့ 10 အခမဲ့အဆင့်မြှင့်: 10 ပြန်ပြောသင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကပိုပြီး
• Microsoft Windows နဲ့ 10 အခမဲ့အဆင့်မြှင့်: ပြန်ပြောခုနစ်ခုထက်ပိုမေးခွန်းတွေကို
• Microsoft Windows နဲ့ 10 အခမဲ့အဆင့်မြှင့်: ပြီးခဲ့သည့် roundup
• Microsoft Windows နဲ့ 10 အခမဲ့အဆင့်မြှင့် revisited: ပြန်ပြောသင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေခုနစ်ခုထက်ပို
• Windows ကိုအဆင့်မြှင့်အကြောင်းသင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကို7Windows ကိုမှ 10, သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်.
27021	10 အပိုဒ်, ဂျက်မေးပါ, computing, အင်္ဂါရပ်များ, ဂျက် Schofield, နည်းပညာ
← သင်ကမြေထုဆွဲအားလှိုင်းတံပိုးတို့သည်အကြောင်းသိပါဖို့လိုအရာအားလုံးကို လည်းအတော်များများတွင် neuron အသိုလှောင်သည့်ဥစ္စာကိုလု ယူ. →